Akhbaarti Zamaanki Hore .. Abraha Oo Ahaa Nin Xabashi Ah Oo Duulaan Ku Soo Qaaday Kacbada
Ka dib markuu Abraha soo gaaray togga Xasar ee Musdalifa iyo Mina u dhexeeya ayaa maroodigii istaagey oo diiday inuu u dhaqaaqo dhinicii kacbada, marka dhinaca kale loo jeediyana waa ordayey. Xaaladdu markey muddo sidaa ahayd ayaa Ilaahay markii dambe u soo diray Shimbiro mid walba waddo saddex dhagax oo ay ku kala waddo afka iyo labada lugood .. Ninkii uu dhagaxaasi ku dhacana wuu googo'ayey oo wuu dhimanayey .. Dhagaxaantii dadkii dhammantood kuma wada dhicin ee waxay ku dhacday intuu Rabbi u qaddaray intii kalena waa carareen iyagoo isjiiraya.
Ninkii Abraha ahaa isagoo naf xumi ku jirto ayuu tegey Sanca oo uu ku dhintay. Qureysh oo markii ciidanku yimid buuraha ku kala carartay, markeey Abraha iyo ciidankiisii waxa qabsaday arkeen ayey guryohoodii ku soo laabteen. Qisadan waxaa ka warrantay suuratul-Fiil waxayna dhacday sannadkii uu Rasuulku SCW dhashay. waxaana loo bixiyey sanadki Maroodiga